Sidee loo doortaa ereyada muhiimka ah ee ereyada si aad u hesho booqashooyin badan oo dad badan?
Dooro ereyada muhiimka ah ee website-kaaga si aad u hesho booqashooyin badan oo dadka isticmaala ayaa xoogaa dadaal ah. Taasi waxay noqon doontaa hawl wakhti badan qaadata. Laakiin iskuday kasta oo leh keywords keywords ku haboon ayaa lagu abaal marin doonaa si weyn oo ku saabsan maalgashiga. Ka dib, wax macno ah maaha in aad shaqeysid oo aad lacag badan bixiso si aad ugu abuurto wax weyn, taas oo aan la arki karin dadka isticmaala liiska Google ee natiijooyinka raadinta.
Haddii aad kali dareento inaad ku badantahay badda, adigoo adeegsanaya Mashiinka Raadinta iyo nuxurka keywords, waxaan halkan u imid inaan ku caawiyo inaad samayso doorashada saxda ah oo aad leedahay ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah. Sidaa daraadeed, aan ogaanno sida loo abuuro bogga bogga ee aan fiicnayn. Maadaama ujeedadeena muhiimka ahi tahay inaan ka dhigno dhagaystayaashaaga bartilmaameedka ah ee doonaya inaad wax ku akhrido xiisaha, ma aha? Makiinadaha raadinta, sida Google laftiisa, waa inay sidoo kale jeclaadaan!
Mabda'a saxda ah iyo furaha muhiimka ah
Ka hor intaan wax kale,. Ereyga muhiimka ah waa erey muhiim ah oo lagu fiirsanayo dadka isticmaalaya si ay u dhamaystiraan ujeeddada ugu dambeysa ee codsigooda raadinta. Fiican. Laakiin waxa ku saabsan habka ugu wanaagsan ee lagu dooran karo ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee loogu talagalay bogaggaaga iyo ku raaxeysta gaadiidka badan?
Waxaan soo jeedinayaa in aan dib u dhaco. Aan aragno habka saxda ah ee xulashada ereyada muhiimka ah, laga soo eego macaamiishaada suurtagalka ah. Dhamaantood, waxaa loogu talagalay in ay sameeyaan isticmaalka wax ku oolka ah ereyada muhiimka ah iyo odhaahaha muhiimka ah.
U soo bax si aad u weydiiso Dhageysiga Targetigaaga
Kala hadal macaamiishaada mustaqbalka, tusaale ahaan barxada bulshada, khilaafaadka blogka, ama mawduuca mawduuca ee ku yaala Webka. Weydii dadka waxa tixraac ah ee ay caadi ahaan u sameynayaan alaabtaada. Wonder waa sida ay u badan tahay inay ugu yeeraan alaabooyinka ama adeegyada aad la tacaaleyso. Waxaad la yaabi kartaa qaar ka mid ah waxyaabaha dhabta ah ee nolosha ee ereyada ay dadku isticmaalaan si ay u sameeyaan codsi raadin. Ugu dambeyntii, isku day inaad aragto waxa weedha dhaadheer ay u badan tahay in loo isticmaalo weydiinta codsiga ee loo gudbiyay alaabooyinkaaga ama adeegyadiinna. Raadinta Warbaahinta Bulshada
Maalmahan, goobaha Warbaahinta Bulshadu waa dad badan oo ay dadku sameeyaan raadinta internetka ee waxkasta oo ay ubaahanyihiin.Waxaa jira wadahadallo badan, dib u eegis, waxbarid iyo waxyaabo kale oo faa'iido leh oo adiga kugu haboon. Kaliya tagaan xidhiidhada bulshada, sida Twitter, ama Facebook, si aad u aragto waxa dadka dhabta ah ee hadda sheegaya, iyo waxa ku jira erayada muhiimka ah ee ay isticmaalayaan si ay u tixgeliyaan mawduucyada aad xiiseyso. Iyo hubi inaad hubiso mowduucyada ugu muhiimsan ee ku yaal goobtaada, taas oo faa'iido leh.
Isticmaal aalado loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee cilmi baarista
Ka hor inta kale, waxaad isticmaali kartaa kaliya foomka raadinta Google ee automatic. Waxaan loola jeedaa inaad bilowdo inaad qorato si aad u aragto talooyinka ugu caansan ee ay bixiso matoorka raadinta, sida ay dadku u codsanayaan. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa googlTrends database si ay kuu siiyaan fikrad wanaagsan si aad u caawisa xulashada ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah. Kadib dhan, waxaan kugula taliney inaad codsato Wordtracker. Waxaan aaminsanahay inay tahay aaladda ugu fiican ee ujeedadeena, taas oo ku tusi karta tiro aad u tiro badan oo xogta wax ku oolka ah sida tartanka hadda, mugga raadinta, tixgelinta dhulkaaga iyo wax ka badan Source .